श्रीमानले कोठा भित्र परपुरुषसँग श्रीमती भेटेपछि यस्तो गरे पुलिस समेत चकित… – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Video/श्रीमानले कोठा भित्र परपुरुषसँग श्रीमती भेटेपछि यस्तो गरे पुलिस समेत चकित…
श्रीमानले कोठा भित्र परपुरुषसँग श्रीमती भेटेपछि यस्तो गरे पुलिस समेत चकित…
धनगढीः कञ्चनपुरमा श्रीमानले परपुरुषसँग श्रीमतीलाई भेटेपछि कोठा भित्रै थु’निदिएका छन्।जिल्लाको बेलौरी नगरपालिका ६ बस्ने बिनोद नेपालीले ३८ वर्षीया श्रीमतीलाई परपुरुषसँग भेटेपछि कोठा भित्र थुनेर प्रहरीलाई खबर गरेका थिए।जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक अमरबहादुर थापाले नेपालीले बेलौरी नगरपालिका–८ का ३८ वर्षीय विवेक लम्साल र श्रीमतीलाई कोठामै भेटेपछि थु’नेको बताए।
नेपालीले दुवै जनाले आफूमाथि अ’भद्र व्यवहार गरेको जा’हेरी दिएपछि उनीहरुलाई प’क्राउ गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाले दिनेशखबरलाई बताए। ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
महिलाका अनुसार त्यसपछि यस क ण्ड मलाई काठको लि ङ्गमा राखेर फेरि पुरानै आकार दिएर नयाँ जस्तै बनाइन्थ्यो । त्यसपछि फेरि प्याकेटमा भरेर बेच्ने गरिन्थ्यों। टिभी च्यानलका अनुसार प्रयोगमा आएका यस्ता कति क ण्ड म फेरि बिक्री भयो भन्ने विषय अहिले खुलेको छैन । महिलाका अनुसार उनले जति किलो क ण्ड म बनाउथिंन्, त्यहीअनुसार पैसा आउथ्यों ।
आफुले ५ जनाको ह’त्या गरेको स्वीकार गर्दै भने यस्तो गर्नुको कारण !
जे बर मागे पनि पुग्ने, यो कस्तो अनौठो शक्ति! एकपटक पुग्नै पर्ने दर्शनको लागी! पुग्न न सके एक शेयर अबश्य गर्नु होला ! भिडियो सहित131
रमेश र नन्दाको बिवाहकै दिन कसले गर्यो यति ठुलो लफडा
नेपाल माथि नाकाबन्दी लगाउने मोदीको तयारी – हेर्नुहोस भिडियो